करिब १२ सय कैदीले घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाईने ! करिब १२ सय कैदीले घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाईने !
करिब १२ सय कैदीले घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाईने !
काठमाडौं, कात्तिक १६ – हाल कारागारमा रहेका करिब ८ प्रतिशत कैदीले ‘वैकल्पिक कारागार’ का रुपमा घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाउन सक्नेछन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले एक महिना लगाएर तयार पारेको विवरण अनुसार वैकल्पिक कारागारमा बस्ने पाउने कैदीको संख्या १२ सय रहेको छ ।